अब देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार Bizshala -
काठमाण्डौ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ।
कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ।यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्ठले छापेको छ ।
सिटीभी मोवाइलको फेस्टिभ अफर : बाइकदेखि विदेश घुम्ने अवसरसम्म
काठमाण्डौ । लेटेस्ट र ब्राण्डेड मोबाइलको कारोबारमा ख्याति कमाएको...
सामसुङ ग्यालेक्सी नोट-८ नेपालमा, मोवाइल फुटे बिमा सुरक्षा पनि !
सामसुङले आफ्नो ग्यालेक्सी नोट-८लाई पहिलोपटक नेपालमा सार्वजनिक...
सामसङको ‘खुशी फर्की आयो’ योजना
काठमाण्डौ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले महान् पर्वहरु दशैं, तिहार र...
अँध्यारोमा पनि मालिक चिन्ने आइफोन, नयाँ तीन भर्जनले विश्व
काठमाण्डौ । अमेरिकाको चर्चित कम्पनी एप्पलको बहुप्रतिक्षित आइफोन-८...
ज्योत्सनालाई न्यू फेस अफ सामसङको कदर
काठमाण्डौ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाल अफिसले बिहीबार एक...
तपाईंको आँखा पढेर खुल्नेछ सामसङको ग्यालेक्सी नोट–८
काठमाण्डौ । सामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी नोट–८ स्मार्टफोन बजारमा...
सामसुङका उपाध्यक्षलाई पाँच वर्ष जेल, सरकारी लाभ लिन घूस
काठमाण्डौ । दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले प्रविधि संसार‍को विशाल...
सायोमीको नोट फोर बोक्नुभएको छ ? गोजीमै पड्किन सक्छ है !
काठमाण्डौ । तपाईले पकेटमा बोकिरहेको स्मार्टफोन पड्कियो भने के होला...